Professional oru e ji mara nke ịkwanyere sports flooring-News-Topflor China ejedebeghị
Echiche:6 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2021-06-01 Mmalite: Saịtị
1. Okwu nkasi obi
Elu nke ụlọ egwuregwu egwuregwu egwuregwu PVC nwere ike bụrụ nke gbagọrọ agbagọ mgbe etinyere ya, dịka akwa akwa ejiri aka ya kpuchie ikuku. Mgbe ị dara ma ọ bụ amị amị, mmetụta nhịahụ nke teknụzụ na-akwado ụfụfụ ikuku nwere ike ibelata mmerụ egwuregwu.
2. Nsogbu ịma jijiji
Remjọ na-ezo aka na nso nke nrụrụ ala n'ihi mmetụta. Nnukwu ebe ahụ na-ama jijiji, o yikarịrị ka ọ ga-akpata mgbawa. E nwere ụdị ụjọ abụọ: tremor point and tremor mpaghara.
3. Nsogbu nke ịma jijiji
Ihe mkpali nke ndi mmadu mebere n’oge mmega ga emeputa nkpatu n’elu ala egwuregwu PVC. Ọdịdị nke ala ga-enwe ọrụ nke ịmịkọrọ mmiri, nke pụtara na ala kwesịrị inwe arụmọrụ nke ịmịkọrọ mmetụta ike. Mmeghachi omume nke ndị na-eme egwuregwu na ala egwuregwu PVC Mmetụta ike dị obere karịa mmegharị na ala siri ike, dịka ala simenti. Nke ahụ bụ: mgbe onye na-eme egwuregwu wụliri wee daa n’ala, ọ dịkarịa ala, 53% nke mmetụta ahụ ga-enwerịrị ala, iji kpuchido nkwonkwo ụkwụ onye na-agba ọsọ, meniscus, eriri afọ, na ụbụrụ, ka ndị mmadụ ghara emetụta n’oge mmega ahụ. merụrụ ahụ. Ọrụ nchedo ya na-echekwa na mmadụ enweghị ike imetụta ndị agbata obi ya mgbe ọ na-agagharị na ala egwuregwu PVC. Nke a bụ echiche nke ịmịkọrọ mmiri, mmebi ahụ na ndọtị ndọtị nke akọwapụtara na ụkpụrụ German DIN.
4. Nsogbu nke esemokwu ọnụọgụ
Nnyocha e mere na-egosi na 12% nke ndị egwuregwu basketball nwere mmerụ ahụ na usoro nke ịtụgharị ọnọdụ. Ọnụ ọnụ nke esemokwu nke ala egwuregwu na-egosi ma ala dị oke esemokwu (nke na-ebelata mgbanwe nke ntụgharị) ma ọ bụ na-amị amị amị (nke na-eme ka ọghara ịdapụ). N'iburu n'uche na onye na-eme egwuregwu na-agagharị na nchekwa, ọnụọgụ nke esemokwu n'etiti 0.4-0.7 kwesịrị ịbụ uru kachasị mma. A na-ejigide ọnụọgụ nke esemokwu nke ala egwuregwu PVC n'etiti ọnụọgụ a. Esemokwu esemokwu nke ụlọ egwuregwu PVC ọkachamara bụ 0.57. O nwere esemokwu zuru oke ma dị oke oke iji hụ na nkwụsi ike nke usoro ahụ na-ejigide nkwụsi ike n'akụkụ niile nke ije. Agbanwe agbanwe na mgbe niile nke esemokwu arụmọrụ iji hụ na mmegharị na-agbanwe agbanwe na ntụgharị ọnọdụ na-enweghị mgbochi ọ bụla.
5. Nsogbu nke ịgba bọọlụ
Nleghachi azụ nke bọl bụ iji dobe basketball site na elu nke 6.6 ụkwụ n'elu ala egwuregwu iji nwalee nloghachi nke basketball. A na-egosipụta data a dị ka pasent, a na-ejikwa ịdị elu elu nke basketball na ala ụlọ dịka ntụle atụ iji gosipụta ọdịiche dị elu dị elu. Iwu nke egwuregwu bọọlụ n'ime ụlọ chọrọ ka ejiri ala maka asọmpi egwuregwu ma ọ bụ ọzụzụ, dị ka basketball na egwuregwu bọọlụ ndị ọzọ dịka ịwụda egwuregwu na ịghaghachi bọọlụ ahụ, na-achọ ka nkwekọ ntụleghachi azụ bọọlụ dị na egwuregwu egwuregwu kwesịrị ịdị ukwuu ma ọ bụ hà 90% nke ọkachamara Thelọ egwuregwu egwuregwu PVC nwere nkwụghachi bọl na-enweghị atụ ma kwụsie ike. Enweghị ebe nwụrụ anwụ na-agbanwe n'ala, yana ọnụọgụ ntụgharị ya nwere ike iru 98%.
6. Nsogbu ike egwuregwu nloghachi laghachi
Nke a na-ezo aka ike egwuregwu ewepụtara site na ala egwuregwu PVC mgbe ndị egwuregwu na-emega ahụ iji meziwanye egwuregwu.
7. Nsogbu ibughari ibu
Ibu ibu, nkwụsi ike, na ndụ ọrụ nke ala egwuregwu ndị ọkachamara ga-emerịrị ihe mpi na ọzụzụ chọrọ. Dịka ọmụmaatụ, mgbe hoop basketball na-egwu egwu na ụlọ egwuregwu ndị metụtara ya na-aga n'elu ala, elu na usoro nke ala agaghị emebi. Nke a bụ ụkpụrụ German DIN Germankpụrụ na echiche ebugharị akọwapụtara.